I-China DP-22 ye-Infrared Thermal Imaging Camera kunye ne-Factory | UDianyang
Umgaqo wokusebenza komfanekiso we-infrared thermal:
Umboniso wobushushu we-infrared uguqula imitha engabonakaliyo ye-infrared ekhutshwe ukusuka kumphezulu wodonga ongaphandle ube yimifanekiso ebonakalayo eshushu ngokutshintsha kobushushu bangaphandle. Ngokubamba ubungqongqo bemitha ye-infrared ekhutshwe zizinto, ulwabiwo lobushushu bezakhiwo lunokugwetywa, ukuze kugwebe indawo ekubambeke kuyo nokuvuza.
Ukusebenza komfanekiso we-infrared thermal:
Lawula umgama wokudubula:
Hayi ngaphezulu kweemitha ezingama-30 (ukuba ifakwe ilensi yomnxeba, umgama wokudubula ungaphakathi kweemitha ezili-100)
Lawula i-engile yokudubula:
I-engile yokudubula mayingagqithi kwiidigri ezingama-45.
Ukuba akukho kugxilwa ngokuchanekileyo, ixabiso lamandla enzwa liyakuncitshiswa, kwaye ukuchaneka kobushushu kuya kuba kubi. Kwinto yokubhaqa enexabiso elincinci lokwahluka kobushushu, icandelo elinexabiso elicace gca linokuphinda lenziwe, kwaye ke umfanekiso ucace gca.
Ukulungiswa komfanekiso we-infrared thermal imager:
Isixhobo sekhamera eshushu somfanekiso kunye nesoftware yohlalutyo yonke inemisebenzi eyahlukeneyo yepaneli yemibala. Ngokwezinto ezahlukeneyo zokubhaqa, kunokukhetha imibala enomdla ngakumbi yemifanekiso eshushu.
Kunzima ukufumanisa indawo evuzayo kunye nokuhombela kwinkangeleko yesakhiwo, kwaye udonga lwangaphandle lwakhiwo lujongane nengxaki yokufunyanwa kobonda. Ukungeniswa kwezixhobo ezikrelekrele zokufumanisa, ngokuqinisekileyo kuyintsikelelo enkulu kuphando lwentsimi, ngokusebenzisa infrared, ngokutshintsha kobushushu, emfanekisweni. Ukuze iqela lobuchwephesha licace gca ngoonobangela bokuvuza, uluhlu olupheleleyo lweenkqubo zolondolozo, kungcono ukusombulula ingxaki, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
Izicelo kwiitheminali ezihambayo
Ukucaciswa kwekhamera ye-DP-22 ye-infrared thermal ingezantsi,
UkuCatshulwa kweThermal ye-infrared Isigqibo 320x240
Ibala lokujonga Tye 56 °, nkqo 42 °
Umboniso Bonisa isisombululo 320x240
Okulandelayo: I-DP-12 I-infrared Thermal Imaging Ikhamera